Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.5.1 tontolo iainana vetivety fanombanana
Ny mpikaroka dia afaka mitetika ny fanadihadiana lehibe ka hafafiny azy ho eo an firenena 'ny fiainantsika.
Tontolo iainana vetivety fanombanana (Ema) Tafiditra mandray nentim-paharazana fanadihadiana, chopping azy ireo ho any an-sekely, sy ny famafazan'ny azy ireo ho any amin'ny fiainan'ny mpandray anjara. Noho izany, ny fanadihadiana dia azo nanontany fanontaniana amin'ny fotoana mahamety sy ny toerana, fa tsy tao amin'ny tafatafa ela herinandro taorian'ny fisehoan-javatra efa nitranga.
Ema dia miavaka amin'ny endri-javatra efatra: (1) fanangonana ny tahirin-kevitra eo amin'ny tontolo tena izy-tontolo; (2) fanombanana izay mifantoka amin'ny olona ', amin'izao fotoana izao, na dia vao haingana fanjakana na fitondran-tena; (3) fanombanana izay mety ho hetsika-monina, fotoana-monina, na tsapaka nahatonga (arakaraka ny fikarohana fanontaniana); ary (4) vita ny maro fanombanana rehefa mandeha ny fotoana (Stone and Shiffman 1994) . Ema dia fomba mangataka izay Manamora indrindra amin'ny alalan'ny finday ny olona marani-tsaina mifandray amin'ny matetika mandritra ny andro. Ankoatra izany, satria ny finday raitra dia feno Sela Mpandray Hafanana-toy ny GPS sy accelerometers-dia azo atao kokoa ny miteraka fandrefesana mifototra amin'ny asa. Ohatra, manan-tsaina telefaonina azo baikoina mba miteraka ny fanadihadiana fanontaniana raha misy respondent miditra manokana manodidina.
Ny teny fikasana ny Ema dia tsara anefa Mampiseho ny dissertation fikarohana Naomy Sugie. Nanomboka ny taona 1970 ny United States dia nitombo be ny isan'ny olona fa Manidy. Tamin'ny 2005, tokony ho 500 isaky ny 100.000 Amerikana tao am-ponja, ny taham-nigadra ambony noho ny hafa na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao (Wakefield and Uggen 2010) . Ny firongatry ny isan'ny olona miditra am-ponja ihany koa ny firongatry namokatra ny isan'ny olona nandao am-ponja; tokony ho olona 700,000 miala am-ponja isan-taona (Wakefield and Uggen 2010) . Ireo aloha-meloka miatrika zava-tsarotra mafy Talohan 'ny nandaozako an-tranomaizina, ary indrisy maro hiafara any indray any am-ponja. Mba mahatakatra sy hampihenana recidivism, ara-tsosialy sy politika ny mpahay siansa mpanao mila mahatakatra ny zava-nitranga ny taloha-meloka raha hiditra indray ny fiaraha-monina. Na izany aza, ireo antontan-kevitra no sarotra ny hanangonana amin'ny fitsipika fomba fanadihadiana aloha-meloka, satria miezaka ny sarotra hianatra sy ny fiainany dia tena miovaova. Fandrefesana fomba izay miisa fanadihadiana isaky ny volana vitsivitsy malahelo be dia be ny fihetsehana eo amin'ny fiainany (Sugie 2016) .
Mba nianatra indray fidirana dingan'ny aloha-meloka be marina tsara kokoa, Sugie naka fitsipika mety santionany ny 131 ny olona avy any amin'ny lisitra feno ny olona nandao am-ponja any Newark, New Jersey. Izy nanome mpandray anjara tsirairay amin'ny finday manan-tsaina izay tonga manan-karena sehatra fanangonana antontan'isa. Sugie Nampiasa ny finday mba hanatanteraka roa karazana fanadihadiana. Voalohany, dia naniraka ny "traikefa santionany fanadihadiana" amin'ny tsapaka fotoana voafantina eo amin'ny 9 ora maraina sy 6 ora hariva manontany mpandray anjara momba ny asa amin'izao fotoana izao sy ny fihetseham-pony. Faharoa, amin'ny 7pm, dia naniraka ny "fanadihadiana isan 'andro" nanontany momba ny asan'ny andro izany. Miara ireo fanadihadiana roa manome tsipiriany, longitudinal angon-drakitra momba ny fiainan'ireo ireo taloha-meloka.
Ankoatra ireo fanadihadiana, ny finday ao ny toerana jeografika isaky ny adiny ary misy mari-pamantarana foana firaketana ny antso sy ny soratra Meta-tahirin-kevitra. Izany rehetra izany fanangonana antontan'isa, indrindra fa ny matoantenin'ny atao fanangonana antontan'isa, mametraka fanontaniana etika ny sasany, fa ny famolavolana Sugie nandamina azy ireo tsara. Sugie nahazo fahalalana ampy heviny fanekena avy amin'ny mpandray anjara tsirairay noho izany fanangonana antontan'isa, nampiasa mety fiarovana ny fiarovana, ary nanome fahafahana ny mpandray anjara mba vonoy ny ara-jeografia ampy. Ankoatra izany, mba hampihenana ny mety ho fanerena fampiharihariana ny tahirin-kevitra (ohatra, ny subpoena avy amin'ny polisy), Sugie nahazo ny Certificate ny Tsiambaratelo avy amin'ny governemanta federaly alohan'ny antontan-kevitra dia nanangona (Beskow, Dame, and Costello 2008; Wolf et al. 2012) . Ny fomba Sugie dia nandinika ny fahatelo-antoko (ny oniversite ny Institutional Review Board), ka nandeha lavitra mihoatra noho izay takiana amin'ny fitsipika efa misy. Noho izany, mihevitra aho fa ny asany dia manome sarobidy modely ho an'ny hafa ihany ireo mpikaroka miatrika zava-tsarotra; jereo Sugie (2014) sy Sugie (2016) ho an'ny kokoa tsipiriany momba.
Ny fahaizana mba hahazoana sy hihazona mafy orina ny asa no zava-dehibe ho mahomby reentry dingana. Na izany aza, dia nahita fa Sugie ny mpandray anjara asany ireo zavatra tsy ara-potoana, tsy maharitra, ary indraindray ihany. Ankoatra izany, tao an-kibony mpandray anjara dobo, nisy efatra miavaka tsara lamina: "tany am-boalohany fivoahana" (ireo izay manomboka mitady asa, fa avy eo dia handao avy amin'ny tsenan'ny asa), "maharitra fikarohana" (ireo izay mandany ny ankamaroan 'ny fotoana hitady asa) , "ny asa matetika ataony" (ireo izay mandany ny ankamaroan 'ny fe-potoana miasa), ary "ambany valin-" (ireo izay tsy manaiky ny fanadihadiana tsy tapaka). Ankoatra izany, Sugie te hahalala bebe kokoa momba ny olona izay mitady asa intsony. Mety ho ireo searchers ho kivy sy ketraka ary farany handao avy tao amin'ny tsenan'ny asa. Fantatr'i izany mety, Sugie nampiasa ny fanadihadiana mba hanangona tahiri-kevitra momba ny fihetseham-po ny mpandray anjara fanjakana, ary hita fa ny "tany am-boalohany fivoahana" vondrona tsy mitatitra ambony sehatra ny adin-tsaina na ny tsy fahasambarana. Kosa, ny mifanohitra amin'izany no nitranga: ireo izay mbola mitady asa nitatitra fihetseham-po bebe kokoa ny kivy be izy indraindray. Izany rehetra izany dia tsara-grained, longitudinal tsipiriany momba ny fitondran-tena sy ny fihetseham-po toetry ny taloha-meloka dia zava-dehibe ny fahatakarana ny sakana sy easing izy ireo hiatrika ny tetezamita hiverina any amin'ny fiaraha-monina. Koa, izany rehetra izany tsipiriany tsara-grained dia efa hita tao amin'ny fitsipika fanadihadiana.
Misy telo ankapobeny lesona avy amin'ny Sugie ny asa. Voalohany, fomba vaovao tanteraka ny mangataka mifanaraka amin'ny fomba nentim-paharazana ny santionany; Tadidio, fa Sugie naka ny fitsipika mety santionany avy Amin'ny endriny voafaritra mponina. Faharoa, avo-matetika, longitudinal ohatra dia mety ho sarobidy indrindra ho an'ny fianarana traikefa ara-tsosialy izay tsy ara-dalàna sy mavitrika. Fahatelo, rehefa fanangonana antontan'isa fanadihadiana dia miaraka nomerika soritra, etika olana fanampiny mety hitranga. Aho hitondra ny fikarohana ny etika amin'ny an-tsipiriany ao amin'ny Toko 6, fa ny asa Sugie mampiseho fa ireny olana ireny no addressable ny feon'ny fieritreretany sy ny voahevitra mpikaroka.